Pabrika ambany: Mpanamboatra ambany, sinoa
Pataloha fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena vehivavy malemy, pataloha mihazakazaka manao fampihetseham-batana
Vita amin'ny lamba jaky vita amin'ny jaky, malefaka ary mahazo aina. Tongotra ribed, tsotra ary malemy paosin'ny elastika, Designstring Design Side Seam Pocket Design ho mora mitondra vatana reflektiva famindrana Marka, fenitra ho an'ny fanatanjahan-tena Side Seam Pocket Design manampy ny fahaiza-miasa ary afaka mametraka zavatra madinidinika.
Akanjo lava vita amin'ny fanatanjahan-tena an'ny vehivavy
Ity Pair Of Shorts ity dia malaza be. Saika ny mpihazakazaka rehetra dia tia an'ireny akanjo fohy ireny. Ny endrika mifanohitra amin'ny fantsom-pandefasana loko amin'ny tongotra, tanora sy tsara tarehy Ny famolavolana lasantsy semi-arc amin'ny tongotr'ilay sombin-damosina dia malaza ary azo alaina amin'ny famolavolana matihanina, Ar
Pataloha volom-borona vita amin'ny volondavenona vita amin'ny volondavenona TRANO TRANO TRANO CRANE MAMPITSAHATRA TOKONY HAHAZOAN-JANAHARY, FENO MAZOTRA
Pataloha fihenjanana teratany volo vita amin'ny pataloha yoga pataloha yoga
Ny valahana miitatra dia mahatonga anao hahatsapa ho mora kokoa mandritra ny fanaovana fanatanjahan-tena nefa tsy dia tery. Ny zaitra tsara, ny savony malefaka ary mafy orina, mampihena ny fifandirana ary mahatonga ny pataloha voapaika azo antoka kokoa Mangatsiatsiaka kokoa ary mahazo aina amin'ny volavolan-tsokosoko am-baravarana amin'ny fahavaratra ary mahazo aina.
Pataloha yoga stitching pataloha avo an'ny vehivavy
Ity karazana akanjo ity dia amidy eran'izao tontolo izao. Mety tsara amin'ny yoga / fihazakazahana / fanatanjahan-tena hafa izy io. Manana fahaiza-manao ratsy izy io. Mahafinaritra sy malefaka tokoa izy io. Ny valahany mifanaraka tsara ary tsy milentika amin'ny volon-koditry ny hoditra, mifanohitra amin'ny famolavolana stitching, fanjaitra enina misy kofehy enina
Pataloha avo voadidy ho an'ny fanatanjahan-tena vita amin'ny vehivavy
Ny pataloha voapaika dia milay kokoa ary mahazo aina amin'ny fahavaratra. Izahay dia mampiditra singa ety an-dranomasina maoderina amin'ny fanatanjahan-tena lamaody sy ny taokanto fanaovana akanjo ivelany. Ny sary tsirairay dia mampiseho ny fitambaran'ny fahaiza-mamorona, ny fiainana sy ny natiora, ny famoronana ny Reverie tsy manam-petra sy ny fitafiana miavaka. Ny fanahin'ny fahalalahana sy ny fikarohana ary
Pataloha fitambaran'olom-bolo vita amin'ny rongony miendrika vehivavy
Leggings roa sombin-javatra sandoka, akanjo miendrika lava voarary ety ivelany, leggings voatenona ao anatiny, lamba mifangaro tena tsara ao anatiny, malefaka raha mikasika
Pataloha yoga ho an'ny fanatanjahan-tena vita amin'ny taovolo ho an'ny vehivavy
Atsangano ny valahany ary ataovy mafy ny tongotra lava kibony mahavariana ny mpijery, ny valahana ary ny fiakarana hozatra, manovà ny endrika rehetra amin'ny pataloha voapaika dia milay kokoa ary mahazo aina amin'ny fahavaratra milamina sy mahazaka fitafiana, malefaka sy mahazo aina ny lamba, mampihena ny tsy fahasahiranana ateraka Nosoratan'i Sports Friction
Pataloha morontsiraka miendrika volom-behivavy
Famolavolana volom-bolo misy elastika, haingony mora ampiasaina haingana sy porofon-drano rehefa milalao rano eny amoron-dranomasina dia mampiseho ny tongotrao lava ny fohy. Mety kokoa amin'ny filalaovana sehatra anaty rano
Akanjo fanazaran-tena momba ny fanatanjahantena vehivavy
Misy famolavolana paosy zipper eo amin'ny ilany ankavia ho mora fitondrana. Ny tady hazavana volafotsy dia miraikitra amin'ny ilany havia sy havanan'ny sarimihetsika aoriana, ka ny fampihetseham-batana amin'ny alina dia misy fiatraikany ary afaka miantoka ny fiarovana ny fanaovana fanatanjahan-tena. Misy Logo fanontana famindrana eo ambanin'ny Le
Pataloha yoga tery fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy
Ny pataloha voapaika dia milay kokoa ary mahazo aina amin'ny fahavaratra, mety amin'ny olona lava, fohy, matavy ary mahia. Ny fitafiana an'ireny pataloha ireny dia mahatonga anao ho mahia manify sy lava. Andao hiara-manao fanazaran-tena! Famolavolana paosy kely akaiky eo am-balahana ho an'ny famolavolana mora
Akanjo fanao amin'ny fanatanjahan-tena vita amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy
Mivelatra kokoa ny elastika elastika, manatanjaka tena, tsy manamafy hena
Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Lamba firakotra roa sosona, Fanodinana santionany sy famokarana,